Fitsarana fiarakodia Mpanao taratasy hosoka 8 tra-tehaka
Valo no voasambotra tamin’ny fanaovana anton-taratasy hosoka mikasika ny fitsirihana fiarakodia, tamin’iny herinandro iny.
Ny dimy tamin’ireo dia tratra noho ny fampiasana hosoka momba ny “attestation de non affectation de véhicules au transport à titre honnereux » izay andraikitry ny ivon-ketra ny famoahana izany. Ny telo kosa tra-tehaka tamin’ny fitsirihana ara-teknika ny fiara, araka ny
Fampitam-baovaon’ny Tale jeneralin’ny aro lozan’ny fifamoivoizana nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety, ny sabotsy maraina teo. Tanjon’ny mpitandro filaminana hatrany moa ny ezaka
fanadiovana sy fialana tanteraka amin’ny kolikoly eo anivon’ny foibe fitsarana fiarakodia, raha ny fampitam-baovao. Nandritra ny hetsika fidinana nataon’ny fitantanana teo amin’ny foibe fitsirihina ara-teknika fiarakodia na DGSR niaraha-niasa tamin’ny “direction de police judiciaire” eo amin’ny Toby Ratsimandrava, eoAndrefan’Ambohijanahary ny 2 ka hatramin’ny 5 jolay teo no nahatrarana ireo tambazotra mpanao hosoka sy fampiasana hosoka karazany roa ireo. Tratra nandritra ny fisavana ny tranon’ireo olondratsy valo ireo ny fitombon-kase hosoka. Efa misy fitaovana informatika tahaka ny solosaina sy ny fanotana printy ny tarasim-panjakana maromaro hosoka tahaka ny “imprimé DGSR”, hatramin’ny “contre visite” an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra na CUA ihany koa tao an-tokatranon’izy ireo. Vonona hanome kalitaon’ny asa hatrany ny sampana fitsirihina fiara-kodia